Nyaya dzaJessica Theifels pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Jessica Theifels
Jessica Thiefels anga achinyora kweanopfuura makore gumi uye parizvino ari munyori wenguva yakazara, zvemukati wekushambadzira wezano uye muridzi webhizinesi. Akave akaverengerwa muForbes neBusiness Insider uye akanyorera Mhandara, Manta, BPlans uye nezvimwe.
Chipiri, January 23, 2018 Jessica Theifels
Ini ndinozviona semunhu mudiki mukushambadzira zvemukati. Ini handidi makarenda akaomeswa, mashehedhi uye maturusi ekushandisa-kwandiri, vanoita kuti maitiro acho anyanyooma kupfuura zvaanofanira kuve. Pasina kutaura, ivo vanoita zvemukati vatengesi vakaomarara. Kana iwe urikushandisa-yemwedzi mitanhatu yemukati yekuverenga khalenda yekushandisa-iyo yako kambani iri kubhadhara-iwe unonzwa uchisungirwa kunamatira kune yega ruzivo rwechirongwa ichocho. Nekudaro, ivo vepamusoro vatengesi vezvinhu vakashama, vakagadzirira kuchinjisa zvemukati zvakatenderedza semhedzisiro